धनगढीका कोरोना संक्रमित युवकको परिवारका सदस्यको पनि नमुना संकलन -
१९ चैत्र २०७६, बुधबार १८:३५ April 1, 2020 Kanchanpur KhabarLeaveaComment on धनगढीका कोरोना संक्रमित युवकको परिवारका सदस्यको पनि नमुना संकलन
धनगढीका कोरोना संक्रमित युवकको परिवारका सदस्यहरुको पनि नमुना संकलन गरिएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बुधबार उनका परिवारका १० जना सदस्यको कोरोना परीक्षणका लागि नमुना संकलन गरिएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रवक्ता डा. जगदिश जोशीले जानकारी दिए ।
शनिबारदेखि धनगढी रंगशालाको क्वारेन्टाइनमा रहेका उनका परिवारका सदस्यलाई मंगलबार मात्रै घर फिर्ता गरिएको थियो । उनीहरुमा कुनै लक्षण नदेखिएपछि फिर्ता गरिएको डा. जोशीले बताए ।
उनीहरुको पनि नमुना लिनुपर्ने अवस्था आएपछि बुधबार पुनः अस्पताल ल्याएर नमूना संकलन गरिएको जोशीले जानकारी दिए । बुधबारनै परिवारका १० जना सदस्यसहित अन्य दुई जना स्वास्थ्यकर्मी र एक जना धनगढी रंगशालाको क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिको पनि घाँटीको स्वाब संकलन गरिएको छ ।
सेती अस्पतालबाट यसअघि २६ जनाको स्वाब परीक्षाण गरिएकोमा २५ जनाको नेगेटिभ र एक जनाको पोजेटिभ रिपोर्ट आएको छ । बुधबार संकलन गरिएका १३ जनाको नमुना बुधबार सा“झ वा बिहीबार बिहान काठमाडौ“ पठाउने तयारी भइरहेको डा. जोशीले बताए ।
१९ मंसिर २०७८, आईतवार ०९:२५ December 5, 2021 Kanchanpur Khabar
२५ मंसिर २०७८, शनिबार १७:०२ December 11, 2021 Kanchanpur Khabar
भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणमा एक इञ्च तलमाथि भए कारबाही हुन्छ : मन्त्री तुम्बाहाङ्फे
२४ माघ २०७७, शनिबार १६:०९ February 6, 2021 Kanchanpur Khabar
नेपालमा आज एकैदिन १० जनामा काेराेना सङ्क्रमण पुष्टि
२१ बैशाख २०७७, आईतवार १८:११ May 3, 2020 Kanchanpur Khabar
सीमा नाकामा रोकिएन ओहोर–दोहोर र तस्करी : कोरोना संक्रमणको अझै डर
२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार १३:३२ May 7, 2021 Kanchanpur Khabar
लमजुङ केन्द्र बनाएर ५.३ रेक्टर स्केलकाे भूकम्प
५ जेष्ठ २०७८, बुधबार ११:२२ May 19, 2021 Kanchanpur Khabar
२७ आश्विन २०७८, बुधबार २१:२८ October 13, 2021 Kanchanpur Khabar